PressReader - Isolezwe: 2017-09-14 - I-ANC kufanele ithole isisombululo esizobumba iqembu
I-ANC kufanele ithole isisombululo esizobumba iqembu
Isolezwe - 2017-09-14 - IMIBONO -
ISINQUMO seNkantolo eNkulu yaseMgungundlovu esithi ukhetho lokuqoka ubuholi be-ANC KwaZulu-Natal ngo-2015 alubanga semthethweni, sengeza ezinkingeni leli qembu elibhekene nazo njengoba lesi sinqumo sizoqhuba uqhekeko nokungezwani.
Inkantolo inikeze uhlangothi olukhale ngaphansi izinsuku ezingu-15 ukuthi lucubungule isinqumo. Selushilo-ke lolu hlangothi ukuthi luzofaka isicelo sokulidlulisa icala ngoba likholwa ukuthi enye inkantolo ingakhipha isinqumo esehlukile kunalesi esiphume eMgungundlovu ngoLwesibili.
Okwamanje kusho ukuthi ubuholi besifundazwe busazophatha kuze kuphume isinqumo mayelana nesicelo sabo sokudlulisa icala. Uhlangothi olunqobile seluvele lushilo ukuthi lufuna ukuthi abachithwe yinkantolo baphume emahhovisi abawaphethe njengamanje.
Uma kugcina kwenzekile lokhu, kuzoba nomthelela nakuhulumeni ngoba emva kokungena kohlangothi oluholwa nguMnuz Sihle Zikalala ehhovisi, kwaba nezinguquko kwiKhabhinethi yaKwaZulu-Natal, kwaxoshwa uNdunankulu Senzo Mchunu nabanye ongqongqoshe.
Akungatshazwa ukuthi uma kubuyela uhlangothi lukaMchunu kuze kube kuphindwa ukhetho, nalo luzophinde lushintshe iKhabhinethi nokuzophazamisa izinhlelo zikahulumeni.
Abadala kwi-ANC nabahlaziyi bepolitiki bathi alukaze lube khona uqhekeko olufana nalolu enhlanganweni, futhi akubonakali kuzoba lula ukuhlanganisa inhlangano ngoba manje kubangwa izikhundla, akusabhekwa ukuthi yini engcono ezosebenzela inhlangano, wonke umuntu ubheka isisu sakhe nesobhululu bakhe.
Kuyishwa impela uma sekuzonquma izinkantolo ngokhetho ngoba kusho ukuthi izinhlaka zangaphakathi zehlulekile noma amalungu e-ANC awazethembi ukuthi zingangenelela ngeqiniso nangokwethembeka. Okubi kakhulu ukuthi kukho konke lokhu kudephulana kwamalungu e-ANC, kusho ukuthi sekugxilwe ezimpini hhayi emsebenzini inhlangano eqokelwe wona wokuhlinzeka abantu ngezidingo zabo.
Engathi i-ANC ingafunda isifundo kuyo yonke le nto, kuthi isisombululo esizoqhamuka kube ngesizolekelela ukubumba inhlangano ukuze iphinde igxile ekusebenzeleni abantu hhayi nje izisu zabo kuphela.